झगडियाको कार्यक्रममा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नै प्रमुख अतिथि ! | चितवन पोष्ट
झगडियाको कार्यक्रममा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नै प्रमुख अतिथि !
गत शुक्रबार राति आयोजित सांगीतिक साँझमा प्रमुख अतिथिका रुपमा न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा बीचमा । दायाँतर्फ अध्यक्ष शर्मिला न्यौपाने र बायाँ अधिवक्ता गजेन्द्र वस्ती ।
भरतपुर । हालैमात्र चितवन जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका हुन् कुलप्रसाद शर्मा ।
चैत २८ गते बढुवा न्यायाधीशको शपथ खाएका यिनै शर्माले त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् चैत २९ गते साँझ नारायणगढमा आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
गत कात्तिकमा होटल व्यवसायीको नयाँ कार्यसमितिको विषयमा असहमति जनाउँदै एक पक्षले जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दा यिनै शर्माको इजलासमा प¥यो । मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा उनले मिल्नु पर्छ भनी फैसला सुनाइदिए ।
उनले मिल्नुपर्छ भनेको अर्थ होटल व्यवसायी संघकी त्यसअघिकी उपाध्यक्ष शर्मिला न्यौपानेकै समूहलाई मान्यता दिनु भन्ने अर्थ लाग्यो । न्यायाधीश शर्मा न्यौपाने समूहकै होटल व्यवसायीले आयोजना गरेको सांगीतिक साँझमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भए ।
झगडिया पक्ष र विपक्षको बारेमा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा अभिव्यक्ति दिन नपाइनेमा उनले बढुवा भएको भोलिपल्टै न्याय परिषद् ऐनअन्तर्गत न्यायाधीश आचारसंहिता २०७४ को ठाडो उलंघन गरे ।
‘मैले मुद्दा मिलाइदिएँ, भनेकै हो नि मिल्नुको विकल्प छैन, तपाईंहरुले माया गरेर मलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिनुभयो धन्यवाद, अरु कार्यक्रममा पनि सम्झनु होला, समय मिलाएर आउँला, न्यायाधीश शर्माले प्रमुख अतिथिका रुपमा भाषण गर्दै भने ।
डिलकुमारजीहरु आउनुभो अब अरु पनि तपाईंहरुसँग मिल्न बाध्य हुनुहुन्छ, न्यायाधीश शर्माले भने । डिलकुमार श्रेष्ठ असन्तुष्ट पक्षका थिए तर, उनी पछि न्यौपाने समूहमा गएका हुन् । न्यायाधीशको यस्तो गतिविधिले न्याय क्षेत्रमै आँच आउने अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।
न्यायाधीशको यस्तो गतिविधि उचित हो कि होइन भनी सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेललाई सम्पर्क गर्दा बैठकमा भएकाले केही बोल्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
यस्तो थियो विवाद
गत कात्तिक १७ गते होटल व्यवसायी संघ चितवनमा नयाँ नेतृत्वका लागि साधारण सभा मिति तोकिएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन कात्तिक १६ गते नै अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहेकी शर्मिला न्यौपाने सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिइन् । तर पहिलोे पटक जिल्लामा यस व्यवसायमा महिला अध्यक्ष हुने नयाँ इतिहास बन्दै गर्दा असन्तुष्ट पक्षहरुले नयाँ कार्यसमिति अवैधानिक रहेको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले ।
अदालतमा मुद्दाको पेशी एक नम्बर न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासमा तोकियो । अन्नतः उनले फैसला गरिदिए मिल्नुको विकल्प छैन भनेर ।
अध्यक्षमा न्यौपानेकै कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने गरी फैसला आएपछि असन्तुष्ट पक्ष फेरि पुनरावेदनका लागि हेटौँडा पुग्यो । पुनरावेदनमा निवेदन दिएको भोलिपल्टै मुद्दा खारेज भयो । आफूहरुले प्रतिउत्तर लगाउनसमेत नभएको होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक ढकालले बताए ।
संघको निर्वाचन अधिकृत र कानुनी सल्लाहकारहरु क्रमशः गजेन्द्र वस्ती र गोपीलाल देवकोटा रहेका छन् । यी दुई अधिवक्ताको न्यायाधीशसँगको नजिकको सम्बन्धका कारण आफूहरुले मुद्दा हारेको र कतिपय ठाउँमा बोल्नसमेत नपाएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
यस विषयमा होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष कमल शर्माले जिल्लाका अन्य प्रमुखहरुले समय दिन नमानेपछि न्यायाधीश बोलाएको बताए ।
होटल तथा रेष्टुरेन्टसँग सम्बन्धित दुईवटा संघ चितवनमा दर्ता भएका छन् । साविकको होटल व्यवसायी संघ र नयाँ होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ चितवन रहेका छन् ।
न्यायालयबाट न्याय नपाएपछि आफूहरु बाध्य भएर गत फागुन अन्तिममा नयाँ संघ दर्ता गरेको अध्यक्ष दीपक ढकालले बताए । तर उनीहरुको संघलाई उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले भने मान्यता दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।